Goverana yakanakisa nguva yemavhidhiyo ako seGIFs | Ndinobva mac
Ruzhinji rwedu tese tave rudzi rwevagadziri vemafirimu. Iyo kamera ye iPhone yedu nePadad iri kuita zvirinani uye zvirinani, tinogara tichitakura nesu, uye tinorekodha mavhidhiyo akawanda uye anowedzera kushandisa chero nguva, kubva parwendo kana kupera kwevhiki kuenda kumusangano neshamwari kana mhuri, chiitiko chemitambo mota kana chero chinhu chinotibata.
Uye patinorekodha mavhidhiyo aya, pane nguva dzawo dzatinoda kugovana nedzimwe shamwari kana nenyika dzese kuburikidza nemagariro. Iye zvino unogona kuita izvi nenzira yakapusa nekutenda kune «AnyMP4 Vhidhiyo 2 GIF Mugadziri», chishandiso chinobatsira cheMac chinokutendera iwe chinja nguva dzemavhidhiyo ako kuita maGIF saka unogona kuvagovana nekukurumidza uye nyore nemunhu wese.
Kubva pane vhidhiyo kuenda kuGIF, nyore uye nekukurumidza
Na «AnyMP4 Vhidhiyo 2 GIF Muiti» hauchazove nechikonzero shandisa nguva dzakasarudzika, dzepakutanga kana dzinonakidza dzemavhidhiyo ako paFacebook, Twitter, Instagram, neemail kana kuburikidza neWhatsApp, Teregiramu uye zvimwe zvinoshandiswa nemasevhisi, kungave neshamwari dzako nemhuri, kana nenyika yese.
"AnyMP4 Vhidhiyo 2 GIF Muiti" ndeye GIF yekugadzira software naizvozvowo inosanganisira mavhidhiyo ekugadzirisa maturusi uye inonzwisisika uye nyore kushandisa interface. Neapp iyi unogona kushandura chero vhidhiyo kuita GIF, diki kwazvo uye nyore kugovana, sezvazviri inoenderana nechero chero vhidhiyo fomati, zvese izvo zvakagadzirwa newe nevamwe zvawakadhonza kubva pa internet.
Uye kana iwe uchida kushandura akati wandei mavhidhiyo, haufanire kuzviita imwe neimwe sezvo iri inotsigira batch kutendeuka. Simply kurodha vhidhiyo, tinya paPlip, sarudza yekutanga uye yekupedzisira nguva, uye rova ​​gamuchira. Zvakareruka sekudaro.
Uye zvakare, uye kana iwe uri kukurumidza, unogona kuwana "AnyMP4 Vhidhiyo 2 GIF Muiti" zvachose mahara uye nokudaro chengetedza iyo 5,49 € yemutengo wayo wenguva dzose. Asi iwe unofanirwa kumhanya nekuti iko kupihwa kune yakatemwa nguva uye musimudziri haana kutaurirana kana zvapera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Goverana yakanakisa nguva yemavhidhiyo ako muchimiro cheGIFs
Isu takaedza iyo Aukey USB 3.0 hub ine 4 USB 3.0 chiteshi